हिमशिखर विद्यालयमा तोडफोड संगै चोरी,२ जना पक्राउ – KarnaliPost Daily
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०७:०८ June 10, 2021 by Karnali Post Daily
तातोपानी गाउँपालिका २ स्थित हिम शिखर माध्यमिक विद्यालयमा तोडफोड संगै चोरी भएको छ । सोमबार राती करिब १२ बजेतिर विद्यालयमा तोडफोड र चोरी भएको हो । चोरी गरिरहेकै अबस्थामा विव्यस अध्यक्ष रुद्रसिंह मल्ल र उनकी श्रीमत्ी गौरा मल्लेले थाहा पाएपछि चोरी तथा तोडफोडमा संलग्न तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी २३ वर्षिय हरिदत्त बुढ्थापा र १७ वर्षिय हस्त खड्कालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको छ ।
विव्यस अध्यक्ष मल्ले र उनकी श्रीमती गौरा मल्ल खेतमा पानी हालेर फर्किने क्रममा तोडफोड गरेको आवाज सुनिएपछि तत्तकाल प्रहरीचौकी लिताकोटलाइ विव्यवस अध्यक्ष रुद्रसिंह मल्लले खबर गरेपछि चौकी ईन्चार्ज टुल्का गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले घटनास्थलमै चोरहरुलाई प्रक्राउ गरेको हो ।
उनका अनुसार विद्यालय चोरीमा संलग्न पक्राउ परेका दुबैजनालाई हदै सम्मको कारबाहि गर्न समेत माग गरिएको छ । भने, प्रहरी चौकी लिताकोट र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले घटनास्थलमा पु्गेर चोरी तथा तोडफोडको मुछुल्का गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक धन बहादुर रोकायाले बताए ।
उनले भने,“निषेधाज्ञाको बेला विद्यालय बन्द रहेको मौका छोपी महत्वपुर्ण कागजात सहित सामानहरुचोरी तथा तोडफोड भएका छन् । विद्यालय संचालन भएपछि पनि संचालन हुने अबस्था छैन् । दोषीलाई कारबाहि र विद्यालयलाई तत्तकाल आबश्यक राहत उपलब्ध गराउन समेत माग गर्दछौ ।”
प्रहरीको मुछुल्का अनुसार स्टील दराज तोडफोड गरी पुनारो निर्णय पुस्तीका,लेखा परिक्षण गरेको बिलल भरपाई, ल्याप्टप ३ थान,ब्याकप ३ पिस,फोन सेट १ थान, प्रोजेक्टर १ थान र डेक्सटप १० थान लगायतका महत्वपुर्ण सामाग्री चोरी भएको छ ।
भने, डिजिटल हाजिरी, ,फोटोकपी मेसिन २ थान ,फाईल ब्याक २ वटा र स्टील दराज गरी विभिन्न अन्य सामाग्रीहरु तोडफोड गरीएको विव्यस अध्यक्ष रुद्रसिंह मल्लले बताए । भने करिब एक दर्जन बढी ढोका फोडिएको छ ।
विभिन्न सामाग्री चोरी तथा तोडफोड बाट विद्यालयको क्षती करिब १५ लाख बराबरको भएको प्राविधिक संयोजक गणेशराज डाँगीले बताए । उनका अनुसार प्राविधिक फाँटका सामाग्रीहरु भताभुंग गरिएको छ ।
भने, विज्ञान प्रयोेगशाा, प्राविधिक फाँटमा राखेका विभिन्न सामान,र कम्प्युटर ल्याबमा समेत तोडफोड गरी सामान कामै नलाग्ने बनाएको विद्यालयले जनाएको छ ।
यता प्रधानाध्यापक रोकायाले दोषीलाई कानुन अनुसार कडा सजाय दिलाउन किटानी जाहेरी हाल्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । मंगलबारनै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी हालेर विद्यालय जस्तो विद्याको मन्दिर तोडफोड गर्ने, चोरीगर्नेलाई कारबाहिका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाई तयारी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने, घटनाको थप अनुसन्धान भईरहेको बताएको छ । पक्राउ परेकालाई २४ घण्टा भन्दा बढी हिरासतमा राख्न नमिल्ने भएकोले विद्यालयले जाहेरी दिएपछि मात्रै कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।
तेस्रो पटक भएको चोरीका क्रममा रंगेहात २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपनि उनिहरुको संजाल ठुलो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यदपी,२ जना मात्रै हुन की अरु पनि सहभागी छन् भन्ने कुरा खुलेको छैन् ।
चोरहरुले तातोपानी गाउँपालिका ५ बस्ने तेज बहादुर कठायतको भे ५ प ३७६० को मोटरसाईकल प्रयोग गरेको पाइएको छ । उक्त मोटरसाईकलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाकै मुटुका अबस्थित २०१६ सालमा स्थापना भएको हिमशिखर विद्यालयमा हाल सम्म तीन पटक चोरी भईसकेको छ । भने तीनैपटक विभिन्न माध्यमबाट चोर पत्ता लागीसकेका छन् ।
तर कारबाहि के भयो भन्ने स्थानीयलाई थाहा छैन् ? त्यसैले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन नदिनका लागि दोषी उपर कडा कारबाहि हुनुपर्ने तातोपानीका स्थानीयले माग गरेका छन् ।
Posted in शिक्षा, स्थानिय तह
जुम्ला विमानस्थलमा एजेण्डकै मनपरीःसर्वसाधारणलाई टिकट पाउन मुस्किल चन्दननाथमा सधै किचलोःमेयर उपमेयरको बिवादले बजेट प्रभावित,राजश्व संकलन ठप्प ग्रामिण भेगका विद्यार्थीको हातमा अझै पुगेन् पाठ्यपुस्तक सरकारी लगानीले नीजि जग्गामा कोल्डस्टोरःमन्जुरीनामाका आधारमा कोल्डस्टोर बनाएको समितिको दाबी कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ देखि
पातारासीमा बाढीको वितण्डःदर्जन काठेपुल र घट्ट बगायो,एकको मृत्यु